घर » कार्य » Crazy Mr Bean
खेल जानकारी: Crazy Mr Bean
विवरण: MR.Bean बाहिर आफ्नो टेड्डी, पुरानो महिला रिसाएर विमान बाहिर फेंकता जो फसाउन crazily विमान फड्को छैन। अब उसले आफूलाई चोट बिना सुरक्षित भूमि छ।
खेल्नु: 523,077 ट्याग: श्री सेम, bean, श्री सेम खेल, हास्यास्पद खेल, रमाइलो, हास्यास्पद, मजा खेल
स्टीवन ब्रह्माण्डको फुटेर यो अनुमति दिन्छ
गरौं गरेको बबल यो, स्टीवन जहाँ खेलाडी बोर्ड मा बुलबुले हटाउन बबल शुट अनन्त मिलान3आर्केड खेल हो। प्लेयर धेरै बुलबुले उहाँले कुनै बबल को लावा खाडलमा घोप्टो कि सक्छन् रूपमा हटाउनु आवश्यक छ।
स्टीवन ब्रह्माण्डको आफ्नो चरण स्टीवन हेर्न
प्ले स्टीवन यूनिभर्स वाच तपाईंको चरण स्टीवन अनलाइन। बाट साहसिक समय, Gumball, बेन 10, नियमित देखाउनुहोस्, द Powerpuff Girls कार्टून नेटवर्क वर्ण खेल्न खेल अनलाइन, हामी नंगे आकार, किशोर Titans, स्टीवन यूनिभर्स, चाचा हजुरवुवा र धेरै
यो गरिब मान्छे सिर्फ गलत च्याउ खाए। अब त्यो एक धेरै विस्फोटक साहसिक गर्न बारेमा।
श्री सेम खतरनाक पिरामिड
यो खेलमा, श्री बीन यो साहसिक समाप्त र घर सुरक्षित आउन छ। उहाँलाई सार्न तीर प्रमुख प्रयोग गरेर हिंड्न मदत।
श्री सेम योद्धा
यो रमाइलो खेल मा, श्री बीन एक योद्धा छ, उसलाई सडकमा सबै राक्षस र परदेशी लड्न मदत।
श्री सेम रोमाञ्चक यात्रा
यो खेलमा, श्री बीन राक्षस उहाँलाई पर्खाइमा जहाँ धेरै चुनौतीहरू छन् विदेशी मुलुकमा, हराएको। श्री बीन यो adveture खेल को सबै स्तर समाप्त गर्न मद्दत गर्छ।
श्री सेम गाढा महल उम्कन
श्री बीन यो गाढा महल घर ​​बाटो फेला पार्न मद्दत, सार्न र जम्प, गरेको चलाउन र चालु दिनु तीर कुञ्जी प्रयोग।
जंगल केटा जंगल मा एक ठूलो साहसिक सुरु भएको छ। उहाँले लुकेको सम्पत्तिहरू लागि देख गर्नुपर्छ र उहाँले पशु मित्र को मद्दतले आफ्नो बाटो पत्ता छ। तपाईंलाई मदत यदि त्यो यति साहसी र यो खजाना फेला पार्न कठिन हुने छैन किनभने यति अनुकूल छ तर
भूत शहर मा श्री सेम
त्यहाँ Chase श्री बीन धेरै भूत हो। उहाँलाई तिनीहरूलाई उम्कन र सरल बायाँ माउस प्रयोग गरेर सुरक्षित घर जान सहयोग गर्नुहोस्।
श्री सेम सागर सुरक्षित
Ferocious सार्ककोसङ्ख्या सागर आक्रमण। श्री बीन, तपाईं श्री बीन शार्क नष्ट गर्न मदत सागर रक्षा गर्न पनडुब्बी जहाजहरू ड्राइव निर्णय
श्री सेम क्याच firefly
श्री बीन fireflies पकड गर्न गुफा मा उड। यो गुफा मा भ्यागुतो र चमेरो छन् पनि fireflies पकड, तपाईं, श्री बीन को चमेरो र भ्यागुतो ध्यान, सकेसम्म धेरै fireflies पकड कृपया तिनीहरूलाई मद्दत छुन छैन।
बच्चा हेजेल फैंसी पोशाक
स्कूलमा फैंसी पोशाक प्रतियोगिता बेबी धुंधला र उनको साथी प्रसन्न हुनुहुन्छ। प्रतियोगिता को विषय "चरा र जनावरहरू" छ, त्यसैले धुंधला एक मयूर पोशाक मा पोशाक योजना। एक स्टोर भ्रमण र को लागि आवश्यक सबै आवश्यकताहरु खरिद गर्न धुंधला र आमा सामेल
श्री सेम कडा मिशन
श्री सेम को संग्रहालयहरु सुरक्षा सहयोग र आतंककारीहरूले नष्ट
श्री सेम अन्तरिक्ष जहाज
यो श्री बीन को हास्यास्पद खेल, श्री बीन विदेशी झगडा गर्न स्पेस मा एक साहसिक छ छ। उहाँलाई यो साहसिक समाप्त र स्कोर प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ।
बाँदर मन्दिर रन
मुसा जादु क्रिस्टल बाँदर चोर्न एउटा ठूलो योजना गरेका र आफ्नो कार्य भइरहेको बाट चोरी रोक्न छ। तिनीहरूले क्रिस्टल बन्द अघि मुसा मा केले सुरु छिटो हुन
flappy श्री सेम
यो श्री बीन को हास्यास्पद खेल हो। तपाईं श्री बीन पाइप भन्दा उड र सडक मा सबै सिक्का प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ।
श्री सेम मादक पदार्थ सेवन छैन
श्री बीन उहाँलाई नियन्त्रण गर्न आफ्नो माउस प्रयोग गरेर घर हिंड्न मदत।
flappy बर्ड 2
एक ठूलो खेल Flappy Birdies रूपमा नाम Flappy बर्ड खेल रूपमा शैली मिलाइएको र यो खेल को सामान्य संस्करण केही मतभेद छ। यो एकल खेलाडी खेल मोड बाहेक दुई खेलाडी खेल मोड छ। तपाईंले यो सुन्दर खेल आफ्नो मित्र संग भाग गर्न सक्नुहुन्छ। गरौं गरेको ष्ठ
बस Flappy बर्ड चाहनुहुन्छ, तर हामी, भेट्न थियो Spongebob र पैट्रिक तिनीहरूलाई टाढा गर्न सक्छन् तपाईं रूपमा उड मदत! तपाईं कसरी उच्च socre पायो गर्न सक्नुहुन्छ? आऊ!
तपाईं Flappy बर्ड र खराब Piggies को प्रशंसक हुनुहुन्छ? यो हास्यास्पद खेल, Flappy बर्ड अन्य संस्करण, तर तपाईं सिक्का सङ्कलन र सडक मा पाइप जोगिन छ।
Amigo pancho 4: यात्रा
Pancho नाम तातो मेक्सिकन मान्छे ठूलो हतारमा छ! एक सुन्दरी Doña उहाँलाई मिति लागि निमन्त्रणा, र उहाँले सकेसम्म चाँडै गन्तव्य आउन पर्छ। उहाँले रोमान्टिक हुन र दुई ठूलो बेलुन त्यहाँ उड निर्णय गरे। तर त्यहाँ ओब धेरै हुनेछ
flappy बर्ड फ्लैश अनलाइन 2
यो Flappy बर्ड अनलाइन गेम छ! सहायता चरा thie पाइप भन्दा उड।